कोरोना भाइरस बाट तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न पसल कति सुरक्षित छन ? – उजेली न्यूज
कोरोना भाइरस बाट तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न पसल कति सुरक्षित छन ?
प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७६, आईतवार ०५:५९
१६ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन देशलाई लकडाउन गरिएको छ । भाइरसबाट जोगिन सबै नागरिक घरमै छन् । तर, अत्यावश्यक सामाग्री लिन भने बाहिर निस्कनै पर्ने बाध्यता छ ।
तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायतका सामाग्री किन्न कसरी सुरक्षित हुने त ? यसको एउटा नमूना हो, डिल्लीबजारको ढकाल फलफूल तथा तरकारी बजार । यस पसलमा तरकारी किन्न पुग्ने जो कोहीले केही नियमहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पसल सञ्चालकले ग्राहक आएर कहाँ बस्ने भनेर रेखांकन गरिदिएका छन् । तीन फिट फरकको दुरीमा गोलाकार रेखांकन गरिएको छ । रेखांकनमा बसेर पालैपालो पसलको काउन्टरसम्म पुग्न सकिनेछ । त्यहाँ जाने सबैलाई माक्स अनिवार्य गरिएको छ ।
पसलमा ह्याण्ड स्यानिटाइजर पनि राखिएको छ । ग्राहकका लागि मात्रै होइन पसलका सञ्चालक आफैं पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छन् । हातमा पञ्जा, मुखमा मास्क मात्रै होइन अनुसार छेक्नका लागि सीसाको भाइजरसमेत लगाएका छन् ।
परबाटै सामान दिन्छन्, परैबाट पैसा लिन्छन् ।
Previous: बाँकेमा एकजना प्रहरी सहित ५० जना क्वारेन्टाइनमा
Next: राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा राखिएका पाँच जनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’